by Tuan ငုယင်
ဒါဟာပေါင်မုန့်ကိုကျော်ပြန့်နှံ့ဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာတစျခုပါပဲ။ ကျနော်တို့အထဲတွင်ဆလရီတုတ်နှစ်ပါ။ ဒါဟာမကြာခဏ cookies နဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့သဲကန္တာရသို့ဖုတ်ပါတယ်။ ငါမြေပဲထောပတ်အကြောင်းပြောနေတာပါပဲနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအမေရိကန်များ pulverized ပဲတန်ချိန်လောင်အဖြစ် - နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတန်ဖိုးရှိအကြောင်းဘီလီယံကိုပေါင်။ ဒါကအကြမ်းဖျင်းနှစ်စဉ်သုံးစွဲ $ 800 နှင့် 20 ရာစု၏အလှည့်မှာထုတ်လုပ်အကြမ်းဖျင်းနှစ်သန်းပေါင်ကနေစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့တိုးပါတယ်။
မြေပဲပထမဦးဆုံးတောင်အမေရိကအတွက်အစားအစာအဖြစ်စိုက်ပျိုးနှင့်ဒေသတွင်း၌ကအကြမ်းအားဖြင့် 3000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတက် grounded ငါးပိသို့သူတို့ကိုငါလှည့်စတင်ခဲ့ကြသည်။ လူတို့သည်အင်ကာနှင့် Aztecs ဖွဲ့သောမြေပဲထောပတ်များ၏ကြင်နာ၏သင်တန်းကိုယနေ့ကုန်စုံစတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းပစ္စယကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ မြေပဲထောပတ်များ၏ပိုမိုခေတ်မီပုံပြင်အမှန်တကယ်လယ်သမားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြည်တွင်းစစ်အပြီးဝယ်လိုအားရုတ်တရက်ခဲ့သောသီးနှံတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ခဲ့မဟုတ်ရှည်လျားလွန်းပြီးနောက်, 19 ရာစုအဆုံးဆီသို့ဦးတည်လာခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သူကိုမြေပဲထောပတ်ကိုတီထွင်? ဒါဟာပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ တကယ်တော့, ဂုဏ်အသရေထိုက်သူကိုကျော်အစားအစာသမိုင်းပညာရှင်တို့တှငျအခြို့သောသဘောထားကွဲလွဲဖြစ်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ တဦးတည်းသမိုင်းပညာရှင် Eleanor Rosakranse နယူးယောက်ကနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏သားကျူးဘားတွင်အမျိုးသမီးများ၏တစ်ဦးပျော့ဖတ်သို့မြေပဲကြိတ်ခြင်းနှင့်ပေါင်မုန့်ပေါ်ကိုပါက smearing ကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံတင်ပြပြီးနောက်နှင်းဆီ Davis ကအဖြစ်စောစော 1840 ရဲ့အဖြစ်မြေပဲထောပတ်အောင်စတင်အမည်ရှိကပြောပါတယ်။
ထိုအခါအကြွေး Marcellus Gilmore Edson, 1884 ခုနှစ်တွင်တင်သွင်းသူကိုခေါ်အရာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပထမဦးဆုံးမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သူတစ်ဦးကနေဒါဓာတုဗေဒပညာရှင်ကိုသွားသင့်ပါတယ် "မြေပဲ-သကြားလုံး။ " အနံ့အရသာငါးပိတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ပဋိသန္ဓေ ယူ. ထင်တဲ့သူအချို့ကိုရှိပါတယ် ဖြစ်စဉ်သို့အေးစေတဲ့အရည်သို့မဟုတ် semi-အရည်မှလည်းထုတ်လုပ်မယ့်အပူကြိတ်မှတဆင့်လှော်မြေပဲ running ဖော်ပြထား "ထောပတ်, ဝက်ဆီ, ဒါမှမဟုတ်ဆီမွှေးကဲ့သို့တစ်ဦးကိုက်ညီမှု။ " သို့သော် Edson စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်မြေပဲထောပတ်ကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်ရောင်းသောမည်သည့်အရိပ်အယောင်မျှမရှိ။
တစ်ဦးကအမှုလညျးမိမိအစားအသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့်မြေပဲထောပတ်ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းစတင်သူကိုဂျော့ခ်ျအေ Bayle, အမည်ရှိစိန့်လူးဝစ်စီးပွားရေးသမားဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစိတ်ကူးပရိုတိန်းသုံးစွဲဖို့အသားဝါးနိုင်ခြင်းရှိနသောသူသည်သူ၏လူနာတစ်လမ်းရှာဖွေနေခဲ့သူတစ်ဦးဆရာဝန်နှင့်အတူပူးပေါင်းထဲကမွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယုံကြည်နေသည်။
Bayle လည်းစေခြင်းငှါမိမိကုမ္ပဏီကွှေးကျွောခွငျး 1920 ရဲ့အစောပိုင်းအတွင်းကြော်ငြာများသို့ပွေးလေ၏ "မြေပဲထောပတ်၏မူရင်းထုတ်လုပ်သူ။ " Bayle ရဲ့မြေပဲထောပတ်၏သံဗူးအဖြစ်ကောင်းစွာဤပြောဆိုချက်ကို touting တံဆိပ်များနှင့်အတူမြို့သို့ရောက်လေ၏။
ဒေါက်တာဂျွန် Harvey Kellogg
ဒါဟာအများအပြားဘုန်းတော်သြဇာသတ္တမ-day Adventist ဒေါက်တာဂျွန် Harvey Kellogg ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမသွားပါသင့်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့, ဤပြောဆိုချက်ကိုအငြင်းပွားသောသူတို့အားတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ အမှန်မှာထိုအမျိုးသားမြေပဲဘုတ်အဖွဲ့ Kellogg သူမြေပဲထောပတ်အောင်များအတွက်တီထွင်တဲ့ technique ကိုများအတွက် 1896 အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Kellogg ရဲ့ Sanitas ကုမ္ပဏီ Nut ထောပတ်တစ်ခု 1897 ကြော်ငြာ Pre-ရက်စွဲများရှိသမျှသည်အခြားသောပြိုင်ဘက်များကြောင့်လည်းရှိပါတယ်။
ပို. အရေးကြီးသည်သျော Kellogg မြေပဲထောပတ်၏မဆုပ်မနစ်ကမကထဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကကျန်းမာရေးကို၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်ပို့ချချက်ပေးခြင်းတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ကျယ်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ Kellogg ပင်တိုက်ပွဲ Creek အဘိဓါန် Sanitarium, ထိုသတ္တမ-day Adventist ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကထောက်ခံကုသမှုအစီအစဉ်များနှင့်အတူကျန်းမာရေးအပန်းဖြေစခန်းမှာမိမိလူနာမှမြေပဲထောပတ်ဝတ်ပြုကြ၏။ ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုမြေပဲထောပတ်၏ဖခင်အဖြစ် Kellogg ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပေါ်တွင်တဦးတည်းကြီးတွေခေါက်ပေါင်းအခွံမာသီးမှလှော်အခွံမာသီးကနေအကူးအပြောင်းသည်မိမိဆိုးဆုံးဖြတ်ချက်အနိုင်နိုင်ယနေ့စတိုးဆိုင်စင်ပေါ်အပေါ်တွေ့ရသောနေရာအနှံ့ jarred ကောင်းမြတ်ခြင်းတူတဲ့ထုတ်ကုန်များတွင်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Kellogg လည်းတစ်သွယ်ဝိုက်လမ်းအတွက်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်စကေးရောက်ရှိမြေပဲထောပတ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားခဲ့ပါတယ်။ ယောဟန်သည်လမ်းဘတ်သည်ခွံမာသီးထောပတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူ Kellogg ရဲ့တစ်ဦးဝန်ထမ်း, နောက်ဆုံးမှာ 1896 ၌ကျန်ကြွင်းနှင့်စက်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုမြေပဲ-ကြိတ်စက်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မယ့်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကမကြာမီအခြားစက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်မှု, Ambrose Straub, အဆိုပါစက်တွေမြေပဲထောပတ်အတော်လေးငွီးငှေ့ဖှယျခဲ့ရာတွင်အဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုလွယ်ကူကိုဖန်ဆင်း 1903. အတွက်အစောဆုံးမြေပဲထောပတ်စက်တွေထဲကတစ်ခုများအတွက်မူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ခဲ့သည်မယ်။ မြေပဲကပထမဦးစွာအသား grinder မှတဆင့်ထားမခံရမီတစ်မော်တာများနှင့် pestle သုံးပြီး grounded ခဲ့ကြသည်။ တောင်မှထို့နောက်ကတပ်မက်လိုချင်သောအကိုက်ညီမှုအောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်ကို Global သွား
1904 ခုနှစ်, မြေပဲထောပတ်စိန့်အတွက်ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲမှာပိုမိုကျယ်ပြန်အများပြည်သူမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
လူးဝစ်။ စာအုပ်အလိုအရ "Creamy နှင့် crunchy: မြေပဲထောပတ်၏အလွတ်သဘောသမိုင်း, အားလုံး-အမေရိကန်အစားအသောက်," CH Sumner အမည်ရှိ concessionaire မြေပဲထောပတ်ရောင်းဖို့တစ်ခုတည်းသောရောင်းချသူဖြစ်ခဲ့သည်။ Ambrose Straub ရဲ့မြေပဲထောပတ်စက်တွေထဲကတစ်ခုကိုသုံးပြီး, Sumner မြေပဲထောပတ်တန်ဖိုးရှိ $ 705,11 ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်, ထို Beech-Nut ထုပ်ပိုးကုမ္ပဏီမြေပဲထောပတ်စျေးကွက်မှပထမဦးဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာပြီး 1956 ခုနှစ်အထိကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
ဝတ်စုံအတိုင်းလိုက်နာအခြားထင်ရှားတဲ့အစောပိုင်းအမှတ်တံဆိပ် 1909 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်ထဲသို့ဝင်ရသော Heinz ကုမ္ပဏီနှင့် Krema Nut ကုမ္ပဏီ, ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးမြေပဲထောပတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ယနေ့တိုင်ရှင်သန်နေဆဲတစ်ခုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အခြေစိုက်စစ်ဆင်ရေးခဲ့ကြသည်။ မကြာခင်မှာပဲပိုပိုပြီးကုမ္ပဏီများမှ boll ပိုးတစ်ခုဆိုးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကျူးကျော်ရှည်လျားဒေသ၏လယ်သမားတစ်ဦးအဓိကခဲ့ကြောင်းဝါဂွမ်းသီးနှံအထွက်နှုန်းများစွာဖျက်ဆီး, တောင်ဘက်ဖျက်ဆီးအဖြစ်မြေပဲထောပတ်ရောင်း start လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်မြေပဲအတွက်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားတစ်ဦးကိုအစားထိုးအဖြစ်မြေပဲမှလှည့်များစွာကိုလယ်သမားများကအစိတ်အပိုင်းအတွက်လောင်စာခဲ့သည်။
မြေပဲထောပတ်ဝယ်လိုအားကြီးပြင်းတောင်မှကြောင့်အဓိကအားဒေသတွင်းထုတ်ကုန်အဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Krema တည်ထောင်သူ Benton က Black တစ်ချိန်ကဂုဏ်ယူစွာ "ငါသည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြင်ပရှိရောင်းဖို့ငြင်းဆန်။ " ကပ်တိတ်ဆိတ်နေသည်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာတဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းတူသောယနေ့အသံစခွေငျးငှါနေစဉ်, ဒါကြောင့်ရပ်နားထားရမြေပဲထောပတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကောင်းဆုံးဒေသအလိုက်ဖြန့်ဝေသကဲ့သို့အခြိနျမှာအသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါပြဿနာကမြေပဲထောပတ်စိုင်အခဲကနေကွဲကွာဆီကိုအဖြစ်ကထိပ်မြင့်တက်မယ်လို့နှင့်လျင်မြန်စွာအလင်းနှင့်အောက်စီဂျင်မှထိတွေ့မှုနှင့်အတူလုယူသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ယောသပ်သည် Rosefield အမည်ရှိစီးပွားရေးသမားမြေပဲဆီဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ခွဲလာမယ့်အနေဖြင့်မြေပဲထောပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သုံးနိုငျပုံကိုဖော်ပြပေးသောလို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို "အတူတူပင်ထုတ်လုပ်၏မြေပဲထောပတ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို" မူပိုင်ခွင့်အခါ 1920 ရဲ့ပြောင်းလဲသွားသမျှသောသူတို့။ မိမိအပေါ်ကိုချွတ် သွား. သူ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ချိဖို့ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီ Rosefield အစားအသောက်ကုမ္ပဏီများသည်ရန်မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်စတင်ခဲ့သည်။ Rosefield ရဲ့ Skippy မြေပဲထောပတ်, ပတေရုပန်နှင့် Jif အတူစီးပွားရေးအတွက်အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်မှတ်မိအမည်များဖြစ်လာမှပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Edwin Land နှင့် Polaroid ဓါတ်ပုံပညာ
အဆိုပါအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း၏သမိုင်း - မှန်ဘီလူး၏သမိုင်း
အဆိုပါ Snowblower တီထွင်ဘယ်သူနည်း
အဆိုပါ JukeBox ၏သမိုင်း
အဆိုပါ Band-Aid ကို၏သမိုင်း
ခြောက်လ Awesome ကိုအမျိုးသမီးဂိမ်းပြရန်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်
Carcharodontosaurus, သည် "ဂရိတ်အဖြူရောင်ငါးမန်း" ဒိုင်နိုဆော
အင်ဒရူးဂျက်ဆန်အကြောင်းကိုသိမှ 10 အရာ
ကို '90 10 အကောင်းဆုံးဂစ်တာ Riffs
Niels Bohr - အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုယ်ရေးဖိုင်
အနှစ်သုံးဆယ်စစ်ပွဲ: Rocroi ၏တိုက်ပွဲ
နှုတ်ကပတ်တရားတော်အင်္ဂလိပ် - ခက်နှင့်ဖျက C နဲ့ G အသံ
စန္ဒယားအဘို့အ Beginner ဘေ့ Chord
ကျောင်းရဲ့နှစ် 100 နေ့အကြောင်းကလေးများ၏ရုပ်ပုံစာအုပ်များ
ဝလေဝလေ v ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (1970)
ထိပ်တန်း5Reiki ဒဏ္ဍာရီ
ဂျမေကာ Rocksteady ဂီတ၏သမိုင်း
မျိုးဗီဇ Sarazen အလုပ်ရှာဖွေရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
မကောင်းစကားများ: "Butterface" ၏လိင်အရအခွင့်အရေးမြစ်များ
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပြည်နယ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
စပိန် R ကိုစီရင်ရန်ကဘယ်လို